प्रोफेशनस जुन तपाईंको राशि अनुसार उत्तम सूट गर्दछ - क्यारियर र पैसा
प्रोफेशनस जुन तपाईंको राशि अनुसार उत्तम सूट गर्दछ
Professions That Will Best Suit You
प्रत्येक राशि चिन्हमा केहि लक्षणहरू हुन्छन् जुन एक क्यारियर मार्गलाई प्रभावित गर्दछ जुन एक व्यक्तिले छनौट गर्दछ र देखाउँदछ कि उनीहरू कस्तो प्रकारको कर्मचारी हुनेछन्। यदि तपाईं एक सम्पत्ति वा दायित्व हुनुहुनेछ भने यो तपाईंको राशिफलमा निर्भर गर्दछ।
जीविका शर्मा, ट्यारो कार्ड रिडर र एक सल्लाहकार सल्लाहकार फिल्डको बारेमा अन्तर्दृष्टि साझेदारी गर्दछ जुन तपाइँ तपाइँको राशिक साइन मा आधारित छनौट गर्नु पर्छ।
मकरहरूले एक पेशा छनौट गर्नुपर्दछ जहाँ तिनीहरूलाई टोलीको हिस्सा महसुस हुन्छ एक्लोपसमा काम गर्नुको सट्टा। यो कुनै पनि क्षेत्र मा कुनै पनि टीम आधारित भूमिका हुन सक्छ, सफलता एक समूह प्रयास हो तर व्यक्तिगत प्रदर्शन पनि मान्यता छ। यदि तपाईं क्याप्रि हुनुहुन्छ भने, तपाईंलाई थाहा छ तपाईले के हेर्नु पर्छ!
तिनीहरू पेशामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दछन् जहाँ उनीहरूको संसाधनलाई उनीहरूको उत्तम क्षमतामा उपयोग गर्न सकिन्छ। कुनै पनि स्ट्रिम कार्य जहाँ धेरै धेरै कार्यहरू आवश्यक हुन्छ, एक एक्वेरियनले आश्चर्यकर्महरू गर्दछ। उनीहरूले विचार गर्न सक्ने क्षेत्र जनसंपर्क, सञ्चार वा मानव संसाधन केहि नामहरू छन्।
पिसियनहरू चम्किन्छ जब उनीहरूसँग प्रदर्शन गर्न र नतिजा ल्याउन धेरै दबाब हुन्छ। जे होस्, जब तिनीहरूले आफैंका लागि प्रदर्शन गर्नुपर्दछ, तिनीहरू प्रायः ढिलाइ गर्दछन् र उनीहरूको १००% दिदैनन्। उनीहरूको लागि सबै भन्दा राम्रो भूमिका एक परियोजना प्रबन्धक, लगानी बैंकर, व्यापारी को हुनेछ वा तिनीहरूले अन्य पेशा बीच बिक्री मा काम गर्न सक्छन्।
एरियनहरू शान्त वातावरणले काम गर्न चाहन्छन्। जब त्यहाँ उनीहरूको काम वातावरण वा विषाक्त वातावरणमा धेरै आवाज वा गडबडी हुन्छ, तिनीहरू केहि गर्नको इच्छा हराउँदछन्। तिनीहरूको व्यक्तित्व अनुसार सबै भन्दा राम्रो भूमिका एक सरकारी काम वा एक स्वतन्त्र gig हुनेछ कि तिनीहरूलाई आफ्नो सर्त र तालिकामा काम गर्न अनुमति दिनेछ।
Taureans सामान्यतया पेशाहरु को लागी जान्छ जुन उनीहरु लाई थाहा छ कि उनीहरु उत्कृष्ट मा प्राप्त गर्न सक्छन् उनीहरु को अर्थ मा धेरै स्तर-नेतृत्वमा छन्। त्यस्ता व्यवसायहरू सामान्यतया ती हुन् जुन वित्त, आईटी, ईन्जिनियरि ,्ग, शिक्षण आदि जस्ता धेरै आम्दानीहरू उत्पादन गर्न जान्छन्। तिनीहरू यससँग आउने जोखिमहरूलाई कम गर्न कामको कुनै पनि अपरंपरागत लाइनबाट टाढा रहन रुचाउँछन्।
यो सिफारिश गरिन्छ कि उनीहरूका विकल्पहरू अन्वेषण गर्नुहोस् र उनीहरूमा के सक्षम छन् पत्ता लगाउनुहोस्। तिनीहरूले काम को कुनै प choose्क्ति छनौट गर्न सक्दछन् र तिनीहरू सँधै केहि चीजमा अडिनेछन् जुन उनीहरूले सोच्दछन् उनीहरू सँधै गर्न सक्छन्। यो पनि अक्सर भनिन्छ कि मिथुन महान सञ्चारकर्मी हुन् र केही शब्दहरू प्रयोग गरेर मानिसहरूलाई कसरी जित्ने भनेर जान्दछन्। तिनीहरू कुनै पनि क्षेत्रमा राम्रो कुरा गर्न सक्दछन् जुन संचारको आवश्यक पर्दछ!
तिनीहरूले केहि खोज्नु पर्छ जुन उनीहरूको आराम क्षेत्र बाहिर छ। केही चीजको लागि धेरै ऊर्जा चाहिन्छ र मस्तिष्कको धेरै आवश्यकता हुन्छ — विज्ञापन, ग्राफिक डिजाईनि,, लेखन र यस्तै। तिनीहरूले कामको रेखा छान्नु पर्छ जसले उनीहरूलाई चुनौती दिन्छ।
तिनीहरू रचनात्मक क्षेत्रमा सामान्य छन्। क्रिएटिभ यहाँ एक प्रदर्शन कलाको मतलब छैन, यसको मतलब पूर्ण रूपमा कामको एक नयाँ लाइन सिर्जना गर्नु हो - सामाजिक मिडियामा प्रभाव पार्ने काम उनीहरूको जान सक्छ। कुनै पनि कुरा जुन उनीहरूको सृजनात्मक रस बगेर जान्छ त्यसले सँधै रूचि राख्दछ, यो एक प्रतिलिपि अधिकार हो, पत्रकारिता हो, केहि नामको चित्रकला।
भर्जोस साहसी व्यक्तिहरू हुन्। पेशा छनौट गर्दा उनीहरूले ध्यानपूर्वक कामको रेखालाई छनौट गर्नुपर्दछ जहाँ वृद्धिको लागि धेरै अवसर छ। उनीहरूले कार्यमा स्थिरतालाई घृणा गर्छन् र त्यसैले उनीहरूले खाद्य विकास, रसोइ, पाक चाख्ने, गुणस्तर परीक्षण र यस्तै अरू केही गर्न सक्छन्।
लिब्रन्स धेरै ट्रेडहरूको ज्याक हुन्। तिनीहरू कूटनीतिक छन्, त्यसैले उनीहरूले राम्रो गर्न सक्छन् यदि उनीहरू परामर्शदाता बन्छन् र पक्षपातपूर्ण राय साझा गरेर मानिसहरूलाई सल्लाह दिनुपर्दछ। अर्को पेशा जहाँ उनीहरू मानिसहरूलाई शब्द प्रयोग गरेर आकर्षण गर्न सक्छन् बिक्री वा एक लेखक हो किनभने उनीहरूले महसुस गर्न सक्ने कुरा व्यक्त गर्न सक्दछन्। उनीहरू ध्यान चाहन्छन् र तिनीहरूका वरिपरिका मानिसहरूबाट प्राप्त गर्न गाह्रो हुँदैन। यो एउटा कारण हो कि तिनीहरू टिभी व्यक्तित्व वा सोशल मिडिया प्रभावकर्ता पनि हुन सक्छन् किनकि उनीहरूले कसैलाई पनि आफ्नो स्पष्टता र करिश्माले मोहित गर्न सक्दछन्।
बिच्छीहरू राशि चार्टका गो गोटरहरू हुन्। जब उनीहरूले अवसर देख्छन्, तत्कालै यसलाई समातिन्छन्। तिनीहरू पेशा वा पेशा रुचि जहाँ तिनीहरू अधिकार वा प्रसिद्धि छ वा दुवै। यो कामको कुनै पनि क्षेत्र हुन सक्छ जस्तै, अभिनय, व्यवसाय, अनुसन्धान आदि।
तिनीहरू अपरंपरागत मार्गमा जान रुचाउँछन् र आफ्नै खेलका मास्टरहरू। उनीहरूले आफ्नो योग्यता अनुसार पेसा छनौट गरे पनि हुन्छन। Sagittarian ती हुन् जो आफ्नो जोश अनुसरण गर्नुपर्छ। र तिनीहरू जहिले पनि सफलता पाउँछन् यदि तिनीहरूले आफ्नो काममा उनीहरूको उत्कटतालाई बदल्छन्! त्यसोभए यदि तपाईं आफ्नो क्यारियरको त्यो ठूलो जम्पमा योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने, अब समय आयो!
यो पनि पढ्नुहोस्: ताराहरू बोल्छन्: कुन २०२१ ले तपाईंलाई रोक्छ?
घरमा छालाको चमक सुझावहरू
व्यायाम डबल चिनबाट छुटकारा पाउन
चिन कपाल कसरी हटाउने
बादाम तेल कपाल को लागी राम्रो छ
बाक्लो कपाल को लागी प्राकृतिक उपचार
लेहेंगा चोली बिहेका लागि डिजाइन